१७ प्रतिशत किशोरी आमा |
१७ प्रतिशत किशोरी आमा
कुल प्रजनन् दर घट्यो
प्रकाशित मिति :2018-03-16 10:49:53
ललितपुर । नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा हुने वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ‘न्यू एरा’ले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका क्रममा यस्तो पाइएको हो ।
सर्वेक्षणका क्रममा किशोरी उमेरका महिलाको प्रजनन् दर शहरमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा बढी रहेको पाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा १३ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा हुने गरेका छन् भने यो दर ग्रामिण क्षेत्रमा २२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश नं २ मा बढी किशोरी आमा
यस्तै प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी किशोरी आमा हुने गरेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश नं २ मा २७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं ३ मा १० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा किशोरी उमेरमा गर्भवती हुने क्रम घट्दै गएको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
शिक्षा हासिल नगरेका किशोरीहरु मध्ये ३३ प्रतिशतले बच्चा जन्माउन शुरु गरेका छन् भने यो प्रतिशत एस.एल.सी. वा सो भन्दा बढी शिक्षा हासिल गरेका किशोरी महिलामा ७ प्रतिशत मात्र छ ।
सबैभन्दा गरीब, गरीब र मध्यम स्तर आर्थिक अवस्थामा समावेश भएका किशोरी महिला सम्पन्न र सबैभन्दा सम्पन्न अवस्थामा समावेश भएका किशोरी महिला भन्दा चाँडै नै बच्चा जन्माउने गरेको पाईएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार हाल नेपालमा प्रजनन् दर घटेको अवस्था छ । एउटा विवाहित महिलाको औषत प्रजनन दर २.३ छ रहेको छ । जुन सन् १९९६ मा एउटा महिलाको औषत प्रजनन् दर ४.६ रहेको थियो । दुई दशकमा प्रजनन् दर घटेर २.३ मा झरेको छ ।
बसोबास गर्ने ठाउँ र प्रदेश अनुसार प्रजनन् दरमा फरकता छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा महिलाले औषत २.९ बच्चा जन्माउँछन् भने शहरी क्षेत्रका महिलाले २.० बच्चा जन्माउँछन् । प्रजनन् दर प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम (प्रति महिला १.८ बच्चा) छ भने सबैभन्दा बढी (प्रति महिला ३ बच्चा) प्रदेश २ मा छ ।
प्रजनन् दर शैक्षिक स्तर र आर्थिक स्तर अनुसार पनि फरक छ । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका महिला (३.३ प्रतिशत) ले एस.एल.सी. वा सो भन्दा बढी शिक्षा हासिल गरेका महिला (१.८) भन्दा १.५ बच्चा बढी जन्माउँछन् ।
उत्तरदाताको घरपरिवारको आर्थिक स्तर बढ्दै जाँदा प्रजनन् दर पनि घट्दै गएका सर्वेक्षणले देखाएको छ । सबैभन्दा गरिब घरपरिवारमा बसोबास गर्ने महिलाले औषत ३.२ बच्चा जन्माउँछन् भने सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारमा बसोबास गर्ने महिलाले औषतमा १.६ बच्चा जन्माउने गरेको पाईएको छ ।